Kubheka mu "Njere" kuDhivha-ku-Web Mishandirapamwe | Martech Zone
Iyi yemazuva ano "drive kune webhu" mushandirapamwe wakawanda kupfuura kungosundidzira vatengi kune yakabatana kumhara peji. Iko kuburitsa tekinoroji uye yekushambadzira software iyo inogara ichichinja, uye nekunzwisisa maitiro ekugadzira masimba uye akasarudzika macampaign anoburitsa mhinduro dzewebhu.
Chakanakira icho chakasimirirwa nesangano rakadai saHawthorne kugona kugona kutarisa kwete kwete chete analytics, asiwo kufunga nezve ruzivo rwevashandisi nekuita. Iyi ndiyo kiyi yekukwezva nekuchengetedza vashanyi vewebhusaiti vanotora matanho, kugona kuenzanisa zvemukati nemaitiro evatengi uye kudiwa. Makambani anofanirwa kubatanidza zvemukati kune zvese zviripo chiteshi, ingave iri mutsara TV, OTT, kana zvemagariro midhiya - zvirimo zvinofanirwa kuziviswa nemaitiro chaiwo. Meseji yekugadzira inofanirwa kunge yakavakirwa pamashandiro ekushandisa ayo anokamura vatarisiri, saka kushambadzira kunogara kuchirova kwakanangwa nemameseji akakodzera.
Yepamberi yekushambadzira mafemu anogona kuona kuwirirana pakati pesimba mhinduro uye shanduko uye mushandisi ruzivo uye maitiro, uyezve gadzirisa zvemukati pane nhunzi kuvandudza iyo drive-kune-web metric.
Kufananidza yekutanga neyechitatu-bato dhata kwakakosha. Izvi zvinosanganisira kwete chete kunzwisisa zviri kuitwa nemushanyi pawebhusaiti mune chaiyo-nguva, asi zviito zvavaitora vasati vasvika saiti. Kuita izvi kunoenzanisira mishandirapamwe uye nzvimbo nematanho akapamhamha pakuita zvemunhu, uko data kubva kumapuratifomu akasiyana akasiyana anounzwa pamwechete kukudziridza ruzivo rwakanangidzirwa kumunhu. Kubudirira kusanganisa akawanda data masosi kunoda Big Dhata analytics uye kunzwisiswa kweiyo data inonyanya kukosha maererano nekugadzira mhedzisiro inoenderana nevatengi.
Kuvaka hombe yedata maererano nezviito zvevashanyi pawebhusaiti inoda zano rakanyatsorongwa. Iyo tech hwaro hweiyi nzira ndeye kushandisa pixel yekutarisa kuongorora zviito zvemuenzi wese. Wakashongedzerwa nevanopfuura chiuru chevapikisheni mapikisheni, mamaneja emushandirapamwe anogona kuvaka "bhuku rekutamba" remushanyi wese. Ivo vanogona kutanga neUX yekutevera pixel, iyo iyo inobvumidza webhusaiti kuti iwedzere kuwedzera kugadzirisa izvo zvinoita kufamba / kutenga / kushandiswa kwesaiti nekukurumidza uye nyore. Yechitatu-bato data mupi pixel inoshandiswa zvakare kuti iwe ugone kuona mamwe makuki achiteedzera mushanyi - ichipa yakakosha dhata yechitatu-bato dhata. Zvemagariro midhiya yekuita yekutevera ndeimwe nhanho yekuunganidza data, nekushandisa maturusi ekuteedzera kuenzanisa zviitiko zvehukama nemishandirapamwe. Pfungwa yematanho ese aya? Kugonesa chaiyo-nguva chidimbu uye kutarisisa zvirinani pamwe nekuvandudza saiti yevashanyi venguva yemberi.
Kuisa Optimization muKudzidzira
Sezvo mushambadzi anokwevera mu data, ivo vanokwanisa kukudziridza zviratidziro zvemukati zvinoenderana nemaitiro uye hunhu. Izvo zvemukati zvinoenderana zvese kune mumwe nemumwe uye chaicho chishandiso. Izvi ndizvo zvinoitirwa nemunhu wese muindasitiri yekuchaira-kune-webhu, asi vanogumburwa nemaitiro ekugadzirisa ese ari kufamba zvikamu. Nekutenda, kune matekinoroji maturusi kunze uko (uye vanhu vane ruzivo pahunhu) vanogona kupa iwo ruzivo rwekuumba izvo zvirimo uye kutumira meseji.
Funga nezve aya akanakisa maitiro ekuvandudza drive-ku-web kushambadzira
Nzwisisa chigadzirwa. Panofanirwa kuve nekuenderana pakati pekutumira mameseji anodikanwa kutsanangura chigadzirwa uye nezvazvinotora kuti mutengi aende kubva pakuziva kuita chiito.
Tailor mameseji kune zvishandiso. Yepamberi analytics-inotungamirwa mishandirapamwe ichave nedhata pane yavanofarira zvemukati yekutarisa zvigadzirwa uye vozo gadzirisa zvemukati zvinoenderana.
Chinja kuronga vezvenhau. Taira midhiya inosanganiswa kuti ienderane nehunhu hwevatengi hwakaunganidzwa kubva kumushandisi analytics, Kunzwisisa mutsauko mumaindasitiri (ingave chigadzirwa cheganda kana tech.)
Kuwedzera akakurisa mafomu e "njere" kune yekutya-kune-webhu mushandirapamwe inosimbisa yakafara yewebhu mashifiti. Tatama kubva ku "webhusaiti ine hungwaru" kuenda kumapeji ekumhara nezvikwangwani, kuenda kune "webhu 2.0." Uye ikozvino tiri kutamira kune imwe fomu, ine webhusaiti webhusaiti nzvimbo yekutanga, uye kugona kupa zvemukati mameseji kune vamwe vanhu. Iyo webhusaiti haichisiri nzvimbo yekutora maodha, ndiyo yakanaka sosi yezvinonzwisisika zvigadzirwa zvinogona kushandisa kuvaka chikamu, uye panguva imwechete kusimudzira nekukwirisa mishandirapamwe uye midhiya. Iyi ndiyo nzira nyowani yekuita dhiraivha-kuenda-pawebhu, zvinopesana nenzira yegumbeze yekusvitsa maziso mazhinji sezvinobvira uye netarisiro yekuti vamwe vavo vatore matanho.
Kuteedzerwa kwevashanyi vewebhusaiti kwakanyatsojeka, nemuenzaniso kugona kuyera kuti mutengi anofamba zvakadii pamusoro pe "tenga izvozvi" vasati vadzvanya. Kushambadzira mafemu uye mabrandari ayo anoda kwenguva-refu kubudirira mune yavo yekutyaira-ku-web mushandirapamwe inogamuchira dhata njere. Kuziva hakuchisiri icho chinangwa, ndezve kutarisana nemaitiro.
Tags: mishandirapamwe yekushambadzirabig datadhiraivha-kuenda-pawebhuKushandukayekutanga-patihawthorneakangwara mawebhusaitipamapejiwekushandisaPersonalizationnezvikumbaridzochigadzirwa mamesejitenga-Chaicho nguvachaiyo-nguva chikamutarisawechitatu-batomashandisirwoux pixel yekuteveramushanyi kuteedzeravashanyi2.0 web